Deep uzo Ball Iburu Factory - China Deep uzo Ball Iburu Manufacturers, Suppliers
Mkpụrụ ụkwụ miri emi dị mma maka oke ọsọ ma ọ bụ ọbụlagodi oke ọsọ ọsọ, ma na-adịgide adịgide na-enweghị mmezi oge. Nke a na ụdị amị nwere obere esemokwu ọnụọgụ, elu ịgba ọsọ, na dị iche iche size àmà na iche. A na-eji ya nkenke ngwá, ala-mkpọtụ Motors, ụgbọala, ọgba tum tum na n'ozuzu ígwè ọrụ ụlọ ọrụ. Ọ bụ ụdị nke a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ igwe. Tumadi ibu ibu radial ibu, ma nwekwara ike ibu a ụfọdụ ego nke axial ibu.
Mkpụrụ ụkwụ miri emi dị mma maka oke ọsọ ma ọ bụ ọbụlagodi oke ọsọ ọsọ, ma na-adịgide adịgide ma anaghị achọ ndozi oge niile. Nke a na ụdị amị nwere obere esemokwu ọnụọgụ, elu ịgba ọsọ, na dị iche iche size àmà na iche. A na-eji ya nkenke ngwá, ala-mkpọtụ Motors, ụgbọala, ọgba tum tum na n'ozuzu ígwè ọrụ ụlọ ọrụ. Ọ bụ ụdị nke a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ igwe. Tumadi ibu ibu radial ibu, ma nwekwara ike ibu a ụfọdụ ego nke axial ibu.